"Sadio Mane Wuu Fahmi Lahaa Hadii Liverpool Loo Diido Inay Hanato Koobka PL" | Malcab.com Wararka Ciyaaraha
"Sadio Mane Wuu Fahmi Lahaa Hadii Liverpool Loo Diido Inay Hanato Koobka PL"
Sadio Mane wuu fahmi lahaa haddii xilli ciyaareedka 2019-20 la xoreeyay cudurka faafa ee coronavirus in kasta oo Liverpool ay ka tahay kaliya labo guul inay ka sheegato hanashada horyaalka.
Reds ayaa horyaal sugayay in muddo ah, iyagoo ka qaatay 79 dhibcood 29 kulan oo ay ciyaareen, iyagoo 25 dhibcood ka sareeya kooxda Manchester City.
Hase yeeshee Premier League sida inta badan tartamada adduunka oo dhan ayaa loo joojiyay sababo la xiriira xannibaado loogu talagalay in lagu xaddido faafitaanka COVID-19.
Waxaa wali la arki doonaa goorta ama xitaa Premier League ayaa soo laaban doona madaama kooxda hiatus ay sii dheereysatay bilowgii bishii hore.
Si kastaba ha noqotee Mane wuxuu ku adkeystaa inay jiraan walaacyo waaweyn oo laga qabo in ka badan 83,000 oo qof ayaa ku dhintey ka dib markii ay ku dhacday cudurka ‘coronavirus’ adduunka oo dhan.
Markii la weydiiyay hadii uu dareemayo inuu horrey u yahay horyaal Mane wuxuu u sheegay talkSPORT “Uma maleynayo weli Waan jeclahay shaqadeyda waana jeclahay kubada cagta, waxaan doonayaa inaan ku guuleysto garoonka.
Waxaan doonayaa inaan ku guuleysto kulamada waxaanan doonayaa inaan ku guuleysto koob, waa waxa aan jeclaan lahaa Laakiin xaaladdan wax kasta oo dhaca waan fahmi doonaa.
“Way ku adkeyd Liverpool laakiin way ku adkaan laheyd malaayiin dad ah oo adduunka ah Dadka qaar ayaa lumiyey xubno qoyskooda ah taasina waa xaalada murugsan, Laakiin nafsadeyda waa riyadeyda waxaana doonayaa inaan ku guuleysto sannadkan”
”Hadeysan arintaasi aheyn, waan aqbali doonaa Waa qeyb nolosha ka mid ah Waxaan rajeyneynaa inaan ku guuleysan doonno sannadka soo socda.”
Qaar ka mid ah sida Manchester United Luke Shaw ayaa soo jeediyay in Premier League loo qalmo hadii xilli ciyaareedka uusan ku soo laaban.
Sikastaba madaxweynaha UEFA Aleksander Ceferin ayaa horaantii usbuucan sheegay inuu arko “haba yaraatee” taasi oo Liverpool loogu diidi karo hanashada horyaalka, Reds kuma aysan guuleysan horyaal heer sarre ah tan iyo 1989-90 ka hor bilowga Premier League.